ကုသိုလ်​ရပါတယ်​ များများမျှ​ဝေ​ပေးကြပါ ကင်ဆာကို သတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အရွက် - Myannewsmedia
ကုသိုလ်​ရပါတယ်​ များများမျှ​ဝေ​ပေးကြပါ ကင်ဆာကို သတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အရွက်
By phyoPosted on June 15, 2019
ကင်ဆာသတ်နိုင်တဲ့ သင်္ဘောရွက်ပါရောဂါ အတော်များများအတွက် အသုံးဝင်ပုံများကို (ထပ်မံ ဖြည့်စွက် တင်ပြပေးထားပါတယ်)
မိတ်ဆွေတွေ သူငယ်ချင်းတွေ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့တချိုသော မိသားစုဝင်တွေဟာ ကင်ဆာတွေ ဖြစ်နေကြတယ်လို့ ခပ်စိတ်စိတ် ကြားလာရတာများတော့ကင်ဆာလူနာတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် တစိတ်တပိုင်းအထောက်ကူဖြစ်တဲ့ တင်ပြီးသားပို့စ်ကို ပြန်ပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါ။
ဒီထဲမှာ သင်္ဘောရွက်ကို ကိုယ်တိုင် အခြောက်လှန်းပြိး ကြိပ်ထားပုံကိုလည်း ပြပေးထားပါတယ် ။
နေရောင်မှာ ၄ရက်လောက် လှန်းထားရင် အရွက်တွေကတော့ ခြောက်သွားပါတယ်။
အရွက်တွေကို သောက်မဲ့အစား အမှုန့်ကို ၁၀မိနစ်လောက် ရေနွေးနဲ့စိမ်သောက်လိုက်တော့ အဆင်ပြေမယ် လို့ ယူဆလို့ ပါ ။အာနိသင်အားလုံးလည်း ရသွားနိုင်ပါတယ် ။ ပြီးတော့ အရွက်မှာပါတဲ့ ပိုးမွှားလည်း သေသွားနိုင်ပါတယ် ။
နေလှန်းပြီးရင် အရွက်တွေကို သီးခြားချွေပါ သီးခြားကြိပ်ပါ အတူတူမကြိပ်ပါနဲ့ ။အရိုးအတံကို သပ်သပ်ထားပါ။ သပ်သပ်ကြိပ်ပါ ။
အရိုးတံတွေက ခြောက်ဖို့ အချိန်ကြာနိုင်တာမို့ရောကြိပ်လိုက်၇င် စိုထိုင်းမှုကြောင့် မှိုတက်နိုင်ပါတယ် ။
သင်္ဘောရွက်ဟာ ကင်ဆာရောဂါပိုးကို သတ်နိုင်တယ်လို့ ဗီယက်နမ်က တိုင်းရင်းသမားတော်ကြီးက ဆိုပါတယ် အူကင်ဆာဖြစ်နေသူတွေကို စမ်းသပ်ပြီးတိုက်ခဲ့ရာမှာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို တိုက်ဖျက်နိုင်တာ တွေ့ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဆရာမကြီး ဒေါက်တာခင်နွယ်ဝင်းရဲ့ စာအုပ်တွေမှာလည်း ကင်ဆာသမားတွေအတွက် ညွန်းထားတဲ့ အရွက်တွေထဲမှာ သင်္ဘောရွက် ပါဝင်ပါတယ် ။
မိမိတို့ ရဲ့ လက်လှမ်းမှီရာမှာ သင်္ဘောရွက်တွေကို အလွယ်တကူရှာတွေ့ နိုင်သလို ကင်ဆာမဖြစ်သေးရင် တောင်မှာ ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ သောက်သင့်တာပါ ။
ဘာကြောင့် ကြိုတင် သောက်သင့်သလဲဆိုတော့ !!!
ပြုပြင်ပြီး အစားအသောက်များ( Processed Food ) ပြုပြင်ပြီးအသားများ( Processed meat )၀က်အူချောင်း ကြက်အူချောင်းလို အစားအသောက်များ ရယ်ဒီမိတ် အသင့်ချက်ပြုတ်စားသောက်နိုင်တဲ့ အစားအသောက်များမှိုတက်နေမှန်းမသိတဲ့အစားအသောက်များ ဒီတ်လွန်နေတဲ့အစားအသောက်များ ။ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းထားတဲ့အစားအသောက်များ အရွက်အသီးများ တာရှည်ခံဆေးများထည့်ထားတဲ့အကြော်အလှော်အစားအသောက်များဆိုးဆေးပါတဲ့ အစားအသောက်များကို မြန်မာပြည်သူလူထုအတော်များများက ကင်းလို့ ရမယ်မထင်ပါ ဒီအတွက် သောက်ထားသင့်တယ်လို့ အကြံပြုပါရစေ။
( ဆရာမကြီးဒေါက်တာခင်နွယ်ဝင်းကတော့ ၉၀ % ကနေ ၉၅ % သောကင်ဆာတွေဟာ အစားအသောက် အနေအထိုင် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကြောင့် ဖြစ်လာရတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ် )
ဆရာမကြီးဒေါက်တာခင်နွယ်ဝင်းကတော့ လူတိုင်းမှာ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့ဆဲလ်တွေရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ခုခံအားကစဉ်ကလျားဖြစ်တဲ့အခါမှာ လူတိုင်းဟာကင်ဆာတွေဖြစ်နိုင်ကြတာပါ ။
ခန္တာကိုယ်ရဲ့ ခုခံအား ၈၀ရာခိုင်နှုံးဟာ အူမကျန်းမာရာကနေ ရောဂါအားလုံးဝင်နိုင်တယ်လို့ ခေတ်မှီဆေးပညာရှင်တွေကလည်းဆိုပါတယ်။
ဒီတော့ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ကော ကင်ဆာဖြစ်နေသူတွေရောသောက်သင့်တာပါ ။
(၁)သင်္ဘောရွက်အစိမ်း တွေကို ကြိပ်ပြီးတော့လည်း အရည်ကိုသောက်နိုင်ပါတယ် ။
အဲဒါကတော့ ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်အစိမ်းအရည်ကို သောက်ရင်ပိုပြီးကောင်းတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ် ။
(၂) သဘောင်္ရွက်ကိုပြုတ်ပြီးလည်း သောက်နိုင်ပါတယ် ။ သင်္ဘောရွက်အရိုးတံတွေကိုပါပြုတ်တဲ့အခါ ထည့်ပြုတ်ပါ ။သူကထွက်လာတဲ့အစေးတွေကလည်း ဆေးဘက်ဝင်ပါတယ် ။
(၃) သဘောင်္ရွက်ကို အခြောက်လှန်းပြီး လဘက်ခြောက်လို ရေနွေးပူပူမှာထည့်ပြီးတော့လည်းသောက်နိုင်ပါတယ် ။
(၄) သဘောင်္ရွက်နုနုကို တို့ စရာလို့ ရေနွေးစိမ်ပြိးတော့လည်း ထမင်းနဲ့အတူစားလို့ ရပါတယ် ။
(၅) သင်္ဘောရွက်တွေကို ဗီယက်နမ်မှာတော့ကြော်စားလည်းရှိပါတယ်။
(၆) သဘောင်္ရွက်အဖူးတွေအပွင့်တွေကိုလည်းသုတ်စားတာကောတို့ စားတာကော အသုံးပြုလို့ ရပါတယ် ။
(၇)သင်္ဘောအစေ့တွေကိုလည်း တနေမှာ လေးငါး စေ့ခန့်လည်း ၀ါးစားတာ သို့ )ကြိပ်တဲ့အထဲမှာ ထည့်ပြိး စာသုံးနိုင်ပါတယ် ။
(၈) အစာမစားခင်ဖြစ်ဖြစ် အစာစားပြီးဖြစ်ဖြစ်သောက်သုံးနိုင်ပါတယ် ။
မိမိအဆင်ပြေသလို သောက်နိုင်ပါတယ် ။
သဘောင်္ရွက်ဟာ ကင်ဆာအပြင် တခြားအစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းအတွက် အစာချေစံနစ်ကောင်းမွန်တာအပါအ၀င် ယားယံတဲ့အရေပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အနာတွေ ကင်ဆာဘက်ကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ တခြားအဖုအကြိတ်အခဲတွေအတွက်လည်း ကောင်းပါတယ်။
ကိုလက်စထရောတက်နေတာတွေကိုကျစေပါတယ် ။ သဘောင်္ရွက်ဟာ ရောဂါ အတော်များများအတွက်အသုံးဝင်ပါတယ် ။သဘောင်္ရွက် သဘောင်္သီး အပွင့် အမြစ် အားလုံး ဟာဆေးဘက်ဝင်လို့ ဆိုပါတယ် ။ သဘောင်္ရွက်မှာ antioxidants တွေပါဝင်ပါတယ် ။
ခန္တာကိုယ်မှာ အလုံး များ အကြိတ်များရှိတဲ့သူများ ကြိုတင်သောက်ထားပါ ။
မိတ်ဆွေများ ကျန်းမာပြီး ရောဂါဘယများ ကင်းဝေးကြပါစေ။
နိုင်ငံတကာ သတင်းဆောင်းပါးတခုမှာ သင်္ဘောရွက်က ကင်ဆာရောဂါကို တိုက်ဖျက်နိုင်တာတွေကို ရေးသားထားတာပါ အောက်ပါ လင့်မှာလည်း ဖတ်ရူ့ နိုင်ပါတယ်
ကငျဆာသတျနိုငျတဲ့ သင်ျဘောရှကျပါရောဂါ အတျောမြားမြားအတှကျ အသုံးဝငျပုံမြားကို (ထပျမံ ဖွညျ့စှကျ တငျပွပေးထားပါတယျ)
မိတျဆှတှေေ သူငယျခငျြးတှေ ရဲဘျောရဲဘကျတှနေဲ့တခြိုသော မိသားစုဝငျတှဟော ကငျဆာတှေ ဖွဈနကွေတယျလို့ခပျစိတျစိတျ ကွားလာရတာမြားတော့ကငျဆာလူနာတှရေဲ့ကနျြးမာရေးအတှကျ တစိတျတပိုငျးအထောကျကူဖွဈတဲ့ တငျပွီးသားပို့ဈကို ပွနျပွီး တငျပေးလိုကျတာပါ။
ဒီထဲမှာ သင်ျဘောရှကျကို ကိုယျတိုငျ အခွောကျလှနျးပွိး ကွိပျထားပုံကိုလညျး ပွပေးထားပါတယျ ။
နရေောငျမှာ ၄ရကျလောကျ လှနျးထားရငျ အရှကျတှကေတော့ ခွောကျသှားပါတယျ။
အရှကျတှကေို သောကျမဲ့အစား အမှုနျ့ကို ၁၀မိနဈလောကျ ရနှေေးနဲ့စိမျသောကျလိုကျတော့ အဆငျပွမေယျ လို့ယူဆလို့ပါ ။အာနိသငျအားလုံးလညျး ရသှားနိုငျပါတယျ ။ ပွီးတော့ အရှကျမှာပါတဲ့ ပိုးမှားလညျး သသှေားနိုငျပါတယျ ။
နလှေနျးပွီးရငျ အရှကျတှကေို သီးခွားခြှပေါ သီးခွားကွိပျပါ အတူတူမကွိပျပါနဲ့ ။အရိုးအတံကို သပျသပျထားပါ။ သပျသပျကွိပျပါ ။
အရိုးတံတှကေ ခွောကျဖို့ အခြိနျကွာနိုငျတာမို့ ရောကွိပျလိုကျ၇ငျ စိုထိုငျးမှုကွောငျ့ မှိုတကျနိုငျပါတယျ ။
သင်ျဘောရှကျဟာ ကငျဆာရောဂါပိုးကို သတျနိုငျတယျလို့ဗီယကျနမျက တိုငျးရငျးသမားတျောကွီးက ဆိုပါတယျ အူကငျဆာဖွဈနသေူတှကေို စမျးသပျပွီးတိုကျခဲ့ရာမှာ ကငျဆာဆဲလျတှကေို တိုကျဖကျြနိုငျတာ တှရေ့တယျလို့ဆိုပါတယျ။
ဆရာမကွီး ဒေါကျတာခငျနှယျဝငျးရဲ့စာအုပျတှမှောလညျး ကငျဆာသမားတှအေတှကျ ညှနျးထားတဲ့ အရှကျတှထေဲမှာ သင်ျဘောရှကျ ပါဝငျပါတယျ ။
မိမိတို့ရဲ့လကျလှမျးမှီရာမှာ သင်ျဘောရှကျတှကေို အလှယျတကူရှာတှနေို့ငျသလို ကငျဆာမဖွဈသေးရငျ တောငျမှာ ကွိုတငျကာကှယျတဲ့အနနေဲ့ သောကျသငျ့တာပါ ။
ဘာကွောငျ့ ကွိုတငျ သောကျသငျ့သလဲဆိုတော့ !!!
ပွုပွငျပွီး အစားအသောကျမြား( Processed Food ) ပွုပွငျပွီးအသားမြား( Processed meat )ဝကျအူခြောငျး ကွကျအူခြောငျးလို အစားအသောကျမြား ရယျဒီမိတျ အသငျ့ခကျြပွုတျစားသောကျနိုငျတဲ့ အစားအသောကျမြားမှိုတကျနမှေနျးမသိတဲ့အစားအသောကျမြား ဒီတျလှနျနတေဲ့အစားအသောကျမြား ။ပိုးသတျဆေးဖနျြးထားတဲ့အစားအသောကျမြား အရှကျအသီးမြား တာရှညျခံဆေးမြားထညျ့ထားတဲ့အကွျောအလှျောအစားအသောကျမြားဆိုးဆေးပါတဲ့ အစားအသောကျမြားကို မွနျမာပွညျသူလူထုအတျောမြားမြားက ကငျးလို့ရမယျမထငျပါ ဒီအတှကျ သောကျထားသငျ့တယျလို့အကွံပွုပါရစေ။
( ဆရာမကွီးဒေါကျတာခငျနှယျဝငျးကတော့ ၉၀ % ကနေ ၉၅ % သောကငျဆာတှဟော အစားအသောကျ အနအေထိုငျ ပတျဝနျးကငျြအခွအေနတှေကွေောငျ့ ဖွဈလာရတယျလို့ဆိုထားပါတယျ )
ဆရာမကွီးဒေါကျတာခငျနှယျဝငျးကတော့ လူတိုငျးမှာ ကငျဆာဖွဈနိုငျတဲ့ဆဲလျတှရှေိတယျလို့ဆိုပါတယျ ခုခံအားကစဉျကလြားဖွဈတဲ့အခါမှာ လူတိုငျးဟာကငျဆာတှဖွေဈနိုငျကွတာပါ ။
ခန်တာကိုယျရဲ့ခုခံအား ၈၀ရာခိုငျနှုံးဟာ အူမကနျြးမာရာကနေ ရောဂါအားလုံးဝငျနိုငျတယျလို့ခတျေမှီဆေးပညာရှငျတှကေလညျးဆိုပါတယျ။
ဒီတော့ကွိုတငျကာကှယျတဲ့အနနေဲ့ကော ကငျဆာဖွဈနသေူတှရေောသောကျသငျ့တာပါ ။
(၁)သင်ျဘောရှကျအစိမျး တှကေို ကွိပျပွီးတော့လညျး အရညျကိုသောကျနိုငျပါတယျ ။
အဲဒါကတော့ ကငျဆာဖွဈနတေဲ့သူတှဆေိုရငျအစိမျးအရညျကို သောကျရငျပိုပွီးကောငျးတယျလို့ဆိုထားပါတယျ ။
(၂) သဘောင်္ရှကျကိုပွုတျပွီးလညျး သောကျနိုငျပါတယျ ။ သင်ျဘောရှကျအရိုးတံတှကေိုပါပွုတျတဲ့အခါ ထညျ့ပွုတျပါ ။သူကထှကျလာတဲ့အစေးတှကေလညျး ဆေးဘကျဝငျပါတယျ ။
(၃) သဘောင်္ရှကျကို အခွောကျလှနျးပွီး လဘကျခွောကျလို ရနှေေးပူပူမှာထညျ့ပွီးတော့လညျးသောကျနိုငျပါတယျ ။
(၄) သဘောင်္ရှကျနုနုကို တို့စရာလို့ရနှေေးစိမျပွိးတော့လညျး ထမငျးနဲ့အတူစားလို့ရပါတယျ ။
(၅) သင်ျဘောရှကျတှကေို ဗီယကျနမျမှာတော့ကွျောစားလညျးရှိပါတယျ။
(၆) သဘောင်္ရှကျအဖူးတှအေပှငျ့တှကေိုလညျးသုတျစားတာကောတို့စားတာကော အသုံးပွုလို့ရပါတယျ ။
(၇)သင်ျဘောအစတှေ့ကေိုလညျး တနမှော လေးငါး စခေ့နျ့လညျး ဝါးစားတာ သို့)ကွိပျတဲ့အထဲမှာ ထညျ့ပွိး စာသုံးနိုငျပါတယျ ။
(၈) အစာမစားခငျဖွဈဖွဈ အစာစားပွီးဖွဈဖွဈသောကျသုံးနိုငျပါတယျ ။
မိမိအဆငျပွသေလို သောကျနိုငျပါတယျ ။
သဘောင်္ရှကျဟာ ကငျဆာအပွငျ တခွားအစာအိမျအူလမျးကွောငျးအတှကျ အစာခစြေံနဈကောငျးမှနျတာအပါအဝငျ ယားယံတဲ့အရပွေားနဲ့ပတျသကျတဲ့ အနာတှေ ကငျဆာဘကျကိုပွောငျးလဲနိုငျတဲ့ တခွားအဖုအကွိတျအခဲတှအေတှကျလညျး ကောငျးပါတယျ။
ကိုလကျစထရောတကျနတောတှကေိုကစြပေါတယျ ။ သဘောင်္ရှကျဟာ ရောဂါ အတျောမြားမြားအတှကျအသုံးဝငျပါတယျ ။သဘောင်္ရှကျ သဘောင်္သီး အပှငျ့ အမွဈ အားလုံး ဟာဆေးဘကျဝငျလို့ဆိုပါတယျ ။ သဘောင်္ရှကျမှာ antioxidants တှပေါဝငျပါတယျ ။
ခန်တာကိုယျမှာ အလုံး မြား အကွိတျမြားရှိတဲ့သူမြား ကွိုတငျသောကျထားပါ ။
မိတျဆှမြေား ကနျြးမာပွီး ရောဂါဘယမြား ကငျးဝေးကွပါစေ။
နိုငျငံတကာ သတငျးဆောငျးပါးတခုမှာ သင်ျဘောရှကျက ကငျဆာရောဂါကို တိုကျဖကျြနိုငျတာတှကေို ရေးသားထားတာပါ အောကျပါ လငျ့မှာလညျး ဖတျရူ့နိုငျပါတယျ
Previous post အဖျားတက်လို့ အအိပ်ပျက် အစားပျက်ပြီး အားနည်းနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
Next post ချစ်သူရဲ့ ဖူးဖူးမှုတ်ချစ်တာကို ခံရမယ့် မိဖုရားဇာတာရှင် ရာသီခွင် (၅) ခု